msi GF63 Thin 9SCXR Gaming Laptop (GTX1650 Max Q,GDDR6 4GB) – ICT.com.mm
HomeToday's Dealsmsi GF63 Thin 9SCXR Gaming Laptop (GTX1650 Max Q,GDDR6 4GB)
msi Bravo 17 A4DDR Gaming Laptop AMD Ryzen (RX5 500M, GDDR6 4GB)Back to Today's Dealsmsi GF63 Thin 9SCXR Gaming Laptop (GTX1650 Max Q,GDDR5 4GB)
msi GF63 Thin 9SCXR Gaming Laptop (GTX1650 Max Q,GDDR6 4GB)
Intel® HM370 Coffeelake refresh 9th Gen Core i5-9300H GeForce® GTX1650 Max Q, GDDR6 4GB DDR IV 8GB (2666MHz) Storage 256GB NVMe PCIe SSD +1TB (SATA) 7200rpm 15.6″ FHD (1920*1080), IPSLevel 60Hz 45%... [Learn more]
Brand: MSISKU: 167079N/ASee more: Computer Accessories, Computer Systems, Gaming, Laptops / Notebooks, MSI, MSI Promo, New Arrivals, Products, Shop, Shwe Lamin Nagar, Today's Deals, Year-End SaleFilter by: 15.6", 1TB HDD + 256GB SSD, 8GB RAM, Black, Free Gift, Gaming Laptops, Intel Core i5-9th Gen, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, Promotion, SLMNG, USD, Windows 10 Home
Intel® HM370 Coffeelake refresh 9th Gen Core i5-9300H
15.6″ FHD (1920*1080), IPSLevel 60Hz 45% NTSC Thin Bezel
Single back light KB(Red)
Intel WirelessAC 9560 (2*2 a/c) + BT5
Battery Pack3cell, 51Whr
Free Gift: Gaming Mouse
msi GF63 Thin 9SCXR Gaming Laptop က i5-9 th Gen (H Processor) အသုံးပြုထားပြီး ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ ‘Entry Level’ Gaming Laptop ကောင်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ Gaming စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိစေဖို့ CPU အဖြစ် Core i5-9300H (i5-9 th Gen) Processor ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Gaming Laptop တစ်လုံးအတွက် အရေးပါတဲ့ ဂရပ်ဖစ်ကတ်အတွက် NVIDIA GeForce® GTX1650 Max Q, GDDR6 4GB ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ နာမည်ကျော် PC ဂိမ်းတွေကို သွက်သွက်လက်လက် ကစားနိုင်တဲ့ဂရပ်ဖစ်ကတ်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် PC ဂိမ်းတွေကို ကစားတဲ့အခါမှာ GeForce GTX 950 ထက် စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ဆ မြန်ဆန်ပြီး GTX 1050 ထက် စွမ်းဆောင်ရည် 70% ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဂရပ်ဖစ်ကတ် ဖြစ်ပါတယ်။ RAM အတွက်ကိုတော့ 2666MHz အမြန်နှုန်းရှိတဲ့ DDR4 RAM 8GB ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Data Storage ပိုင်းမှာမြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိဖို့ နဲ့ ဒေတာအများကြီးသိမ်းဆည်းနိုင်ဖို့အတွက် SSD 256GB နဲ့ HDD 1TB (7200rpm) တို့ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Loading ကြာမြင့်တဲ့ Windows နဲ့ Game Software တွေကို SSD ထဲမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုပြီး မြန်ဆန်တဲ့ Gaming စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေမှာပါ။ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစား 15.6″ နဲ့ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Resolution က Full HD ဖြစ်ပြီး ကာလာအရောင်အသွေး ပိုမိုစိုပြည်စေတဲ့ IPS နည်းပညာပါဝင်တဲ့အတွက် သဘာဝကျတဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့ ဂိမ်းကစားနိုင်မှာပါ။ screen refresh rate –60Hz ဖြစ်ပါတယ်။ ကီးဘုတ်အတွက် အနီရောင် Backlight ပါတဲ့ကီးဘုတ်ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Online ဂိမ်းတွေကို အဆင်ပြေပြေကစားနိုင်ဖို့ လိုင်းဆွဲအားကောင်းတဲ့ Intel WirelessAC 9560 နည်းပညာကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ပေါ့ပါးပါးလွှာတဲ့ကိုယ်ထည်နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး ဘတ္ထရီအတွက်3cell, 51Whr ဘတ္ထရီကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ OS အဖြစ် Windows10 Home ကိုတရားဝင်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် အဆင်ပြေပြေ Windows Update ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Windows Error ကင်းကင်းနဲ့ ဂိမ်းကစားနိုင်မှာပါ။ Mobile ဂိမ်းတွေကို မိမိရဲ့ Gaming Laptop မှာ ကစားနိုင်စေမဲ့ msi App player လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ Gaming Laptop ကို စတိုင်ကျကျ သယ်ယူသွားနိုင်ဖို့အပြင် ထိခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Air Gaming Backpack ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Hardware တွေကို အာမခံ နှစ်နှစ် ပေးထားပြီး ဆားဗစ်အတွက် အာမခံ သုံးနှစ် ပေးထားပါတယ်။
X-shaped ventilation hidden underneath. 1.86 kg light 21.7 mm thin
NVIDIA Max-Q is an innovative approach to crafting the world's thinnest, fastest, quietest gaming laptops.
It hits the sweet spot of ultimate GeForce gaming and impossibly sleek design. Finally,agaming laptop you can put on your lap.
The latest thin Bezel design not only offers immersive visual, but also fitsabigger display inacompact and small form factor. A perfect fit for your mobile experience
Developed under an exclusive partnership with BlueStacks, the MSI APP Player brings seamless gaming experience between mobile games and PC platform,
and leverages customized features as specific keyboard lighting and better graphics with multi-task works.
Total price:K1,424,600 K1,211,600
This item: msi GF63 Thin 9SCXR Gaming Laptop (GTX1650 Max Q,GDDR6 4GB) K1,328,600 K1,118,600